पतिका नजरमा रेखा थापा | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← पहिलो नजरमा पुरुषको के हेर्छन् युवतीहरू ?
माओवादीका दुई कार्ड खनाल र देउवा →
पतिका नजरमा रेखा थापा
बोल्ड नायिका रेखा थापा न बोल्ड संवादसँग डराउँछिन्, न बोल्ड सिनसँग । उनी कुनै फिल्मको विज्ञापनमा रामनामीले शरीर ढाक्न तयार हुन्छिन्, आमहडतालमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग नाच्न तयार हुन्छिन्, कुनै टेलिभिजन सोमा अत्यन्त उत्ताउलो अन्तर्वार्ता दिन्छिन् । पतिका नजरमा यो ‘बोल्डनेस’ कति स्वीकार्य छ त ? रेखा थापाका पति छवि ओझाको आत्मस्वीकारोक्ति यस्तो छः
रेखा थापा जब कुनै भव्य समारोहमा उत्तेजक हाउभाउ देखाउँछिन्, मान्छे त्यति चञ्चले र फरासिली नायिका मजस्तो बुढ्यौलीतिर उन्मुख मान्छेकी श्रीमती हुन् भन्ने पत्याउन गाह्रो मान्छन्　। उनी र मेरो वैवाहिक सम्बन्ध’bout जानकारले पनि विश्वास गर्न गाह्रो मानेजस्तो देख्छु　। हाम्रो सम्बन्ध’bout रेखा हम्मेसी आफैँ खुल्न चाहँदिनन्　। टेलिभिजन वा सिनेमाहलमा फिल्म हेरिरहेका दर्शकले जब बुझ्छन्, ‘चञ्चले, चुलबुले र जङ्की नायिकाले त आफूभन्दा दोब्बर जेठो केटासँग पो बिहे गरेकी रहिछन् ।’ उनीहरू पनि चित्त खान्छन्　।
मैले २०४० सालमै ‘युगदेखि युगसम्म’ बनाएँ　। ०५७ मा ‘हिरो’ फिल्मका लागि नयाँ नायिकाको खोजीमा थिएँ　। त्यतिवेला नायिका खोज्दा सज्जा मैनालीले सागर ढुंगेलको फिल्म ‘यस्तै हुन्छ पिरती’मा निकै राम्रो काम गरेको चर्चा थियो　। मैले पनि यही हल्लालाई पछ्याउँदै नरेश पौडेलसँग सज्जालाई भेट्न सागरको अफिस पुगेँ　। मेरो आँखा पुग्यो एउटी सुन्दरीको ब्लोअपमा　। भर्खरै मिस कोसी भएकी ती मोडलको तस्बिर देखेर म रोमाञ्चित भएको थिएँ　। उनै थिइन्- रेखा थापा　। १० कक्षामा पढिरहेकी रेखालाई मोडलिङमा रुचि रहेछ　। हामीले उनको घरमा फोन गरेर रेखालाई काठमान्डू बोलायौँ　। रेखा मेरो अफिस आइन्　। सेक्सी, ग्ल्यामरस र खुब चञ्चले थिइन्　। छोटो लुगा लगाएकी　। र, अरूलाई बालै नदिने एउटी टिनएजर केटी　। उनको वर्षांदेखिको हिरोइन हुने सपना अब पूरा हुँदै थियो ’cause मैले उनलाई ‘हिरो’ फिल्ममा अनुबन्धित गर्ने भएको थिएँ　।
पहिलो भेटमै मैले यो फैसला गरेको थिएँ　। उनले मलाई अभिभावक ठानिन्　। चञ्चले, चुलबुले रेखाको हाउभाउबाट उनी मसँग खुल्दै गएको स्पष्टै हुन्थ्यो　। तर, मैले उनलाई ‘यो फिल्म भन्ने दुनियाँ देख्दा मात्रै रंगीन हो, यहाँ धेरै बदनामी कमाइन्छ, तिमी फिल्म नखेल बरु राम्रो पढेर कुनै जमिनदारसँग बिहे गर,’ भनेँ　। एयर होस्टेसको अफर छाडेर हिरोइन बन्न आएकी उनले फिल्म नै खेल्छु भनिन्　।
पहिलो भेटमै मलाई रेखा मनपरेकी हुन्　। त्यसको केही समयपछि मैले रेखालाई फोन गरेर भनेँ, ‘मसँग बिहे गर्छौ ?’ उनी स्तब्ध बनिन्　। केही जवाफ दिन सकिनन्　। हुन पनि त्यो स्वाभाविक थियो ’cause म रेखाभन्दा दोब्बर जेठो थिएँ　। तर, मैले उनको ‘सुरक्षा’का लागि भनेको थिएँ　। मेरी माइली श्रीमती गीताञ्जली सुनुवार मरेको एक वर्ष मात्र भएको थियो र मलाई जीवनसाथीको खाँचो महसुस भइरहेको थियो　। उनले के सोचिछन् कुन्नि ? उनले केही दिनमै घरमा बुबालाई ‘म छविसँग बिहे गर्न तयार छु’ भनिछन्　। पछि, मैले उनको बुबासँग पनि रेखाको हात मागेँ　। त्यसवेला उनले हुन्छ भने, तर उनी निकै भावुक भएर रेखालाई अँगालो मारिरहेका थिए र आँसु झारिरहेका थिए　। हामीलाई तामझामसाथ बिहे गर्न लाज लाग्यो　। बिहेको घोषणा गर्‍यौँ र सँगै बस्न थाल्यौँ　। त्यही वेला ‘हिरो’ फिल्मको सुटिङ पनि भइरहेको थियो　। पहिलोपटक सुटिङका लागि मेकअप गरेपछि रेखालाई नराम्री देखेँ　। सर्ट सुरु भयो　। तनाब भयो　। तर, उनी गानामा नाच्न थालेपछि भने म अचम्मित भएँ, ’cause त्यो बुलन्द नाच थियो　। ‘हिरो’का नायक राजेश हमालले त भनेका थिए, ‘को हिरोइन हो ? कलिली छे त　। ओठ निचोर्दा पनि दूध आउलाजस्तो　।’ हुन पनि उनी बच्चै थिइन्, भर्खर १६ वर्षकी　।
लाग्छ- त्यसवेला रेखालाई मेरो आँट मनपरेको हो　। उनलाई पनि फिल्मकै मान्छेसँग काम गरेर फिल्म खेल्न पाए नानाथरिका अफवाहबाट बच्न सकिन्छ भन्ने लोभ पनि लागेको थियो कि ? उमेरको अन्तरले हाम्रो विचारमा केही फरक हुन सक्छ　। मैले उनलाई फिल्ममा हिँड्न सिकाएँ　। कुन सही ? कुन गलत सिकाएँ र आज उनी एउटी परिपक्व नायिका बनेकी छिन्　। उनलाई मैले भनेको छु- तिमीलाई मभन्दा अर्को कोही मान्छे मन पर्‍यो र ऊसँग खुसी हुन सक्छु जस्तो लाग्यो भने मलाई पर्खेर बस्नु पर्दैन, गए हुन्छ　। यो दस वर्षको अवधिमा रेखाले ९० बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन्　। हिरो, कस्तो साइनो, यस्तै रहेछ जिन्दगी, अजम्बरी नाता, हिम्मत, किस्मत, हिफाजत, कसले चोर्‍यो मेरो मन उनका केही चर्चित फिल्म हुन्　।
मैले भेट्दा रेखा अरूलाई मान्छे नगन्ने, निकै घमन्डी स्वभावकी थिइन्　। अहिले उनको स्वभाव निकै फेरिएको छ　। उनलाई मैले निकै माया गरेर परिवर्तन गराएको हुँ　। रेखा मलाई सधैँ ‘मामु’ भनेर सम्बोधन गर्छिन्　। मचाहिँ रेखाजी भन्छु, रिस उठ्दा　। अरू वेला नानु, बाबु भन्छु　। हामीले बिहे गरेको यत्तिका वर्ष भयो　। तर, हामी दुई मात्रै, कतै घुम्न गएका छैनौँ　। सधैँको कामले होला, उनी प्रायः थकित हुन्छिन्　। त्यसवेला उनको निर्दाष अनुहार देख्दा एकदम माया लाग्छ　। उनी जति बोल्ड छिन् त्यत्तिकै भावुक पनि　। यति भावुक कि मैले ठूलो आवाजमा झर्किएँ मात्र भने पनि एकान्तमा लुकेर रुन थाल्छिन्　।
घमन्डी र छिटो रिसाउने स्वभावकी छिन् उनी　। घरमा सानो काम पनि गर्दिनन्　। बिहान उठ्छिन् र सिरक पनि नमिलाईकन बाहिर निस्कन्छिन्　। बिहान उठेपछि म आफैं बेड मिलाउँछु　। अहिलेसम्म उनले कहिल्यै पनि खाना पकाएकी छैनन्　। काम गर्ने केटाले खाना पकाउँछ　। बरु कहिलेकाहीँ म भाँडा माझ्छु　।
रेखा फ्र्यांक, मिहिनेती र राम्रो अभिनय गर्ने केटी हुन्　। कसैसँग डराउँदिनन्　। मान्छे हेरेर ट्याकल गर्ने बानी छ　। हाम्रो धेरै कुरामा मनमुटाव हुन्छ, झगडा पर्छ　। र, हाम्रो झगडाको विषय फिल्म नै हुन्छ　। झगडा परेको वेला हामीबीच दुई महिनासम्म पनि बोलचाल हुँदैन　। निकै रिसाउने बानी छ रेखाको　। एकपटक कस्तोसम्म भएको छ भने उनको जन्मदिन थियो　। साँझ हामीले पार्टी दिएका थियौँ फिल्मकर्मीलाई　। पार्टीमा आउन ढिला गरिन् रेखाले　। ढिला आउँदा उनको हातमा एउटा घडी थियो　। साथीले उपहार दिएको रहेछ　। मैले पटक-पटक सोधेँ, ‘घडी कसले दिएको ?’ धेरैपटक सोध्दा पनि उनले बताइनन्　। त्यसपछि मैले उनलाई नराम्रोसँग पिटेको थिएँ　। उनी खुब रोएकी थिइन्　। भोलिपल्ट उनको आँखामा गम्भीर चोट देखेँ　। भोलिपल्टचाहिँ पिटेकोमा पछुतो लागेको थियो　। त्यसपछि, हामीबीच महिनौँसम्म बोलचाल भएन　। पछिल्लोपटक झगडा परेर बोलचाल पनि नभएकोचाहिँ गएको वैशाखमा हो　। मलाई उनको संगत जोसुकैसँग भए पनि कुनै आपत्ति छैन, तर कुनै केटासँग आपत्तिजनक क्रियाकलापमा संलग्न भेटेँ भनेचाँहि म डिभोर्स गर्छु　। पक्का !
सुटिङको वेला रेखा महिनौँसम्म बाहिर हुन्छिन्　। त्यसवेला भने म उनलाई साह्रै मिस गर्छु　। एक्लै हुँदा खुब दिक्क लागेर आउँछ　। बेलुका कोठामा पुग्छु र त्यो रित्तोकोठा देख्दा भावुक बन्छु　। हामी सँगै हिँड्यौँ भने मान्छेले अनेक कुरा गर्छन्　। बढी त हाम्रो नमिल्दो उमेर देखेर छक्क पर्छन्　। त्यसैले हामी पार्टीतिर जाँदा पनि एक्लै-एक्लै जान्छौँ　।
मलाई गाडी चलाउन आउँदैन, रेखा चलाउँछिन्　। कहिलेकाहीँ मेरो बाइकमा चढ्न उनी ‘इन्जोय’ गर्छिन्　। झमझम पानी पर्दा बाइकको पछाडि बसेर घुम्न रमाउँछिन्　। त्यसवेला लाग्छ, श्रीमतीभन्दा पनि उनी मेरो बच्चा हुन्　। रेखालाई वाइन पिउन र चुरोट पिउन मैले नै सिकाएको थिएँ　। पहिले खुब वाइन पिउँथिन्　। अहिले पिउँदिनन्, तर चुरोटको बानी छुटेको छैन　।
मेरी जेठी श्रीमतीबाट दुई छोरा र माइलीबाट एक छोरा छन्　। छोरा र रेखाको उमेर-समूह एउटै हो　। छोराहरूलाई निकै राम्रो व्यवहार गर्छिन् रेखा　। मेरा छोराहरू उनका पि्रय साथी हुन्　। उनले अहिलेसम्म छोरा-छोरी जन्माउने मन देखाएकी छैनन्　। खै अब देखाउलिन् कि ? ३० वर्ष नपुगी जन्माउँदिनँ भन्छिन्　।
रेखाको धेरै खर्च गर्ने र पैसा अलिकति पनि नजोगाउने बानी छ　। हुन त उनैले कमाएको पैसा हो　। उनलाई मैले अहिलेसम्म पैसा दिनुपरेको छैन　। उनलाई पैसा जोगाउ भन्छु　। मेरो कुरालाई हावामा उडाउँछिन्　।
मलाई रेखाले छोटो लुगा लगाएको मन पर्छ　। उनलाई मिनिस्र्कट सुहाउँछ पनि　। स्कर्ट र जिन्स लगाएको बढी मन पर्छ　। गुलाबी रंगको छोटो लुगा लगाउँदा उनलाई म संसारको सबभन्दा सेक्सी देख्छु　। मैले फिल्ममै २५ वर्ष बिताएँ　। रेखाजत्तिकै मलाई मनपर्ने हिरोइन करिश्मा मानन्धर पनि हो　।
हुन त म फिल्ममा लागेको निकै वर्ष भयो　। तर, मान्छे मलाईभन्दा पनि रेखालाई बढी चिन्छन्　। म त्यसैमा दंग पर्छु　। मलाई अरूले ‘रेखाको श्रीमान्’ भन्छन्　। उनलाई चैत-वैशाख खुब मन पर्छ　। उराठलाग्दो मौसम मन पर्छ भन्छिन्　। उनलाई त्यो समय खुब सेक्सी लाग्छ रे　। ग्ल्यामरस लाग्छ रे　।
पहिले रेखा फिल्ममा स्क्रिप्ट पढ्दिनथिन्　। पछि मात्र पढ्न थालेकी हुन्　। पहिलेभन्दा उनको अभिनय निकै खारिएको छ　। उनले धेरै फिल्म खेलिन्　। अहिले ‘अब संख्याभन्दा पनि गुणस्तरमा ध्याय देऊ,’ भन्छु　।
उनी एकचोटि एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग नाचेर पनि चर्चामा आइन्　। तर, माओवादीसँग उनको कुनै सम्बन्ध छैन, बरु मेरो छ　। कहिलेकाहीँ उनी राजनीति गर्छु भन्छिन्　। तर, मलाई विश्वास लाग्दैन　।